Marka la eegayo Sharciga Baadhitaanka Shaqaalaha ee 2020 (Sharciga), waxaad u baahan tahay in la hubiyo inaad buuxisay DHAMMAAN shantan shuruudood ee soo socda lana xiriira shaqada ilmaha:
Inaad kala shaqaynayso carruurta mid ka mid ah adeegyada, goobaha ama haya’daha ku qoran Sharciga (oo loogu yeero ‘Occupational fields’)
Xiriirka aad la leedahy carruurta uu yahay qayb ka mid ah waajibaadkaaga uusan ku ahayna mar dhac shaqadaada
Waa dambi in la bilaabo shaqada la-xiriirta-ilmaha ayadoon la codsan Baarista marka kowaad.
Gal website-ka Baarista kalana dooro Ka-codso Victoria (External link) ama Ka-codso dowlad-gobleeyada kale
Buuxi foomka codsiga online-ka ah, adigoo sheegaya faahfaahinta ku saabsan naftaada iyo haya’daha halkaas oo aad samaynayso shaqada la-xiriirta-ilmaha
Codsadeyaalka Victoria waxay ku soo caddayn karaan aqoonsigooda online ahaan. Xaashida macluumaadka codsadaha dowlad-goboledyada dhexdooda waxay sharxaysaa sida codsadeyaalka dowlad-goboleedyada ay u caddayn karaan aqoonsigooda ayna usoo gudbin karaan codsigooda
Codsadeyaalka Victoria waxay soo dhammaystiraan codsiyadooda ayagoo ka-qaybgala outletka Australia Post ayagoo adeegsanaya baarkoodhka iyo tilmaamaha loo soo email-garayn doono.
Sharcigu wuxuu u ogolaanayaa dadka intiisa badan inay qabtaan shaqada la xiriirta carruurta inta lagu jiro habka baaritaanka kaas oo dhaca mar haddii codsiga Hubinta la soo gudbiyo. Si kastaba ha ahaatee, sharci ahaan, waa inaadan shaqayn haddii aad:
lagugu soo oogay, lagugu xukumay ama lagugu helay dambi galmo, rabshad ama daroogo ku qoran faqradda 2 ee Jadwalka 5aad ee Sharciga
laga reebay shaqada la xiriirta ilmaha iyadoo la raacayo mid u dhigma la shaqeynta sharciga carruurta
lagu siiyay ka-reebitaanka WWC adiga oon markii dambe ka gudbin/baasin Hubinta
Hadii aad ka shaqeyn doontid adeeg uu nidaaminayo Xeerka Adeegyada Carruurta ee 2020 ama adeeg waxbarasho iyo daryeel oo hoos imanaya Sharciga Qaranka ee Adeegyada Waxbarashada iyo Daryeelka 2010 (Victoria)
Amarka kormeerka ama amarka haynta.
Haddii lagaa baaray dembiyada galmada, rabshadaha iyo daroogada iyo edbinta ama natiijooyinka la xiriira edbinta ee ay sameeyeen hay'adaha ku xusan Sharciga. Liiska dambiyada (External link) wuxuu ku yaal boggayaga internetka.
Waa inaad codsataa in laguu cusboonaysiiyo Hubintaada (kaarkaaga) 6 bilood ka hor ama 3 bilood ka dib markay dhacayso haddii aad rabto inaad sii wadato qabashada shaqada la xiriirta ilmaha.
Ka waran haddii aan leeyahay diiwaan dembiyeed ama kuwa la xiriira edbinta ama dambi sharciyeed?
Dembiyada iyo anshax marinta ama natiijooyinka sharci ee laxiriira oo dhan micnaheedu maahan inaad qatar halis ah oo aan qiil lahayn u leedahay badbaadada carruurta sida uu qabo sharciga.
Inaad ku gudubto ama ku dhacdo Baarista waxay ku xiran tahay nooca warbixinnada asluubta xirfad-yaqaanimada daran, dambiga aad gashay,
iyo duruufaha ku wareegsan arimahaas.
Waa sharci darro in aad codsatid hubinta haddii aad:
ku xiran tahay amarka kormeerka ama amarka haynta.
Haddii aan rumeysanahay inaad qatar ku tahay carruurta, waxaan ku ogeysiin doonnaa inaan dooneyno inaan kaa mamnuucno la shaqeynta carruurta anagoo ku siin doono ka-saaris WWC oo Ku-meel-gaar ah.Tan waxay ku siinaysaa fursad inaad noo soo qorto annaga oo na weydiiso inaan tixgelinno sababaha aad u maleyneyso inaad ku gudubto Hubinta.
Haddii, ka dib markaan tixgelino sababahaaga, aad ku dhacdo Hubinta, waxaan kaa saari doonaa WWC taas oo kaa mamnuucaysa inaad la shaqeyso carruurta.
Marxalado dhif ah, waxaad rafcaan ka qaadan kartaa go'aankeenna adigoo ka dalbaya Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT) 28 maalmood gudahood laga bilaabo taariikhda lagaa saaray WWC.
Sidee barayfasigayga lagu xafidayaa?
Waxaa ku dhaqanaa sharciga gaarnimada iyo qarsoodiga. Sharciga Baadhitaanka Shaqaalaha ee 2020, Asturnaanta (baraayfasiga) iyo Ilaalinta Xogta Sharciga 2014 iyo Xeerka Diiwaannada Caafimaadka 2001 ayaa nidaaminaya sida aan u uruurino una isticmaalno macluumaadka shakhsiyeed.
Waa inaanu ogeysiinnaa haya’daada/haaga wixii go’aan kasta oo ku meel-gaar ah ama kama dambeys ah oo laga sameeyey codsigaaga, haddii Hubintaada la hakiyo, la buriyo ama la dhiibo ama haddaad ka noqoto codsiga. Haddaad haya’dda ka saarto diiwaanadaada, waxaan awood u leenahay inaan ku wargelinno haya’daha inaad ka saartay. Ma siin doonno ururka aad u shaqeyso faahfaahinta diiwaannadaada dambiyada ama edbin ama sharciyeyn ah.
Maya. Hubinta la shaqeynta Carruurta waxay baareysaa dambiyadaada iyo edbintaada ama diiwaanintaada nidaamsan waxayna si adag u qiimeyneysaa wixii khuseeya dembiyada galmada, rabshadaha ama daroogada intaad nooleyd. Baarista Police Check waxay qortaa dambiyada dhaca mar ka mid ah waqtiga.
Hubinta la shaqaynta carruurta waxay ay dusha kala socotaa diiwaanada ciqaabta ama edbinta ama sharciyeynta ee qofka haysta kaarka inta uu shaqeynayo kaarkooda. Maadaama hubintu ay aad uga duwan tahay, ururada qaarkood ayaa sameeya labada Hubinba.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan farqiga u dhexeeya hubinta wuxuu ku yaalaa website-ka La-shaqeynta Carruurta, oo hoos yimaada Hubinta Booliiska. (External link)